Ka Baxista Halista Mashruuca F-35 ee Turkiga ee Kordhinta Da | RayHaber | raillynews
HomeGUUDKa bixitaanka halista mashruuca F-35 ee Turkiga ee Kordhinta Dheeraadka ah
Ka bixitaanka halista mashruuca F-35 ee Turkiga ee Kordhinta Dheeraadka ah
13 / 05 / 2020 GUUD, cimilada, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
turkiyenin waa inay meesha ka saartaa khataraha mashruucu sii siyaadin doono
Mareykanka "kama qeybqaadan doono Turkiga illaa iyo bisha Maarso 2020" waxaad u leedahay shirkadaha Turkiga sii wadaan inay soo saaraan qaybo loogu talagalay F-35. Arda Mevlütoğl khabiirka difaaca ee coronavirus wuxuu u sheegay saameynta mashruuca F-35, wuxuu soo jiitay doorka Turkiga.
Sida uu sheegayo warkii Sertac Aksan ee ka soo baxa TRT Haber; Kaliya looma ogolaan doono Turkiga, howsha wax soo saarka iyo dhibaatooyinka la soo maray dhibaatadan waxaana ay bilaabi karaan marxalad cusub oo ajandaha joogtada ah ee mashruuca diyaaradaha dagaalka F-35 uu leeyahay waxoogaa saadaalin ah.
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Dr. Ismaaciil wuxuu sheegay in dhowaan Demir, doorka Turkiga ee mashruucan lagu shaaciyey dadweynaha qaab loo sii wado.
Demir wuxuu su’aal ka weydiiyay mowduuca: “Shirkadahayadu waxay sii wadaan soo saarista iyo gaarsiinta. Waxaan aragnaa in go'aanka lagu la eegi doono casharadii laga bartay hawshan. Waxaa la sheegay in ay joogsato Maarso 2020, laakiin ma aysan joojin. Waa socotaa. Waxaan daacad u nahay barnaamijka. Ku-biirintayada mashruucu waa u muuqataa qof walba. Waxaan sii wadnaa wax soo saarka sida haddii aysan joogsan lahayn. Jawaabtu way iska rogtay indhaha mar labaad mashruuca F-35.
Silsiladda sahayda ayaa khalkhal ku timaadda sababta cudurka 'coronvirus'
Khabiirka siyaasada difaaca Arda Mevlütoğlu wuxuu cadeeyay in Marillyn Hewson, maamulaha shirkada Lockheed Martin, soo saare diyaaradda F-35 Hillaac II, ay tahay iney sharaxdo in silsiladaha sahayda iyo howlaha wax soo saarka ay carqaladeeyeen COVID-19.
Mevlütoğlu wuxuu yiri: "Maamulaha shirkada Lockheed Martin wuxuu sharxay inaysan gaari karin bartilmaameedka iibka iyo gaarsiinta 35 ee F-2020," ayuu yiri Mevlüto saidlu:
“F-35 waxay ku leedahay shirkado badan oo waaweyn iyo kuwo yaryar oo dalal kala duwan ah dalal badan oo mashruucyo caalami ah iyo shabakad wax soo saar leh.
Qalabka, walxaha, dukumintiga iyo wareejinta la midka ah waa in lagu sameeyaa shirkadahaan. Kulammo farsamo ama maamul oo isdaba joog ah oo dabiiciyan ah oo ka dhasha mashruucyo kala duwan; xarunta iyo booqashooyinka garoonka si looga jawaabo dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka; Barnaamijka safarka degdega ah ayaa looga baahan yahay nashaadaadyada ay ka mid yihiin xakameynta iyo keenida softiweer iyo qalabka soo saaray. Sababo la xiriira COVID-19, gaadiidka badda iyo hawada ayaa inta badan carqaladeeya. ”
Geedi socodka horumarka waa mid xanuun badan
Arda Mevlütoğlu wuxuu hoosta ka xariiqay in F-35 ay tahay qoys diyaarado dagaal oo ka kooban seddex nooc oo kala duwan iyo in howsha horumarineed ee mashruucu uu yahay mid aad u xanuun badan, wuxuu sii waday sida soo socota:
“Kharashaad aad u muhiim ah iyo kalandar badan ayaa ka dhacay mashruuca. Ku dhawaad ​​450 diyaaradood, oo la qorsheynayo in la soo saaro in ka badan seddex kun oo wadarta, ayaa la gaarsiiyey ilaa maanta. Markii tirada wax soo saarku kordhay, qaybta unugga diyaaradda ayaa hoos u dhacday. Xilligan, qiimaha halbeega ee nooca F-35A waa $ 89 milyan.
Waxaan arki doonaa saameynta muddada cusub
Sababo la xiriira COVID-19, halista carqaladeynta howlaha wax soo saarka ee mashruuca waxay kuxirantahay sida mudada ka dambeysa COVID-19 uu qaab ahaan u qaabeysan doono. Wadamo badan ayaa horey u jaray miisaaniyadahooda difaaca. Waxaa sidoo kale jira rajo culus oo laga qabo dhicitaanka dhaqaalaha adduunka kadib.
Xaaladdan oo kale, waxaa suurtagal ah in laga hadlo laba xaalado oo kala duwan. Haddii qiimaha unugyada F-35 si uun loo xakameyn karo, si kale haddii loo dhigo, haddii aysan jirin koror weyn, carqaladeynta wax soo saarka iyo gaarsiinta ayaa laga yaabaa inaysan carqaladeyn wadamada macaamiisha. Sababtoo ah, iyadoo ay ugu wacan tahay hoos u dhac ku yimid miisaaniyaddii difaaca, ayaa laga yaabaa inay doorbidaan inay dib u dhigaan saadka diyaaradaha ama qarashaadka cusub.
Waxaa jiri kara dhibaatooyin xagga kala-bixinta iyo gaarsiinta
Isagoo tilmaamay in ay jiraan dhibaatooyin dhinaca kale ee qadaadiicda ah oo dhici kara haddii howshu usocoto sidii qorshuhu ahaa, Mevlütoğlu wuxuu yiri, “Si kastaba ha noqotee, haddii howlaha wax soo saarka ay ku guul darreystaan ​​daacuunka dartiis inay si weyn u kordhaan qiimaha F-35, tani waxay keenaysaa in la jaro ama la jaro amarrada ama gaarsiinta; waxay ka dhigan tahay hoos u dhac ku yimid iibka cusub. ”
Turkiga xaaladdan saameyn ayey ku yeelan doontaa sidee?
Mevlütog "Tani waxay dhacday Maarso 2020 oo laga saaray silsiladda wax soo saarka, sidii loo qorsheeyay, laakiin sidee bay u saameyneysaa socdaalka Turkiga ee ku saabsan sahayda qaybaha?" Marka laga hadlayo su'aasha "jawigaan, warshadaha duulista hawada ee Turkiga, marka la eego fursad ay ku ilaalin karaan kharashaadka, halkii ay kala gorgortami lahaayeen Turkiga arrimaha Mareykanka ee suurtagalnimada kaarka Trump".
Doorka shirkadaha Turkiga ee mashruuca
Qaybaha ay soo saartaan shirkadaha Turkiga ayaa ku jiray dhammaan diyaaradaha wixii ka dambeeyay diyaaraddii ugu horreysay ee F-35. Laga soo bilaabo jirka dhexe ee diyaaradda ilaa qalabka soo dejinta; Meelo badan oo kala duwan oo ka socda mashiinka ilaa garabka, qaybo waxaa soo saaray shirkado maxalli ah.
Turkiga, laga soo bilaabo 1999, mashruucu wuxuu ilaa hadda bixiyay 1 bilyan 400 milyan oo doolar.
Baaxadda mashruucan, shirkadaha Turkiga waxay soo saaraan in ka badan 900 oo shay oo kala duwan oo ah F-35 qaybood. Balanqaadyada qandaraasyada ee shirkadaha ayaa la dhammaystiray illaa xad, iyo qaabdhismeedkan, in kabadan $ 1 bilyan oo dhoofinta ah ayaa la xaqiijiyey. Shirkadaha Turkiga ayaa ah isha kaliya ee laga helo in ka badan 400 F-35 shey.
Ka gudubka tareenka Eurasia ayaa hadda aad u raaxo badan
Turkey Noqon Doonaa Growth Fund Hantida in Mashaariicda ahee inay xoojiso Boqolkiiba Resources 1.5
İETT baahida shidaalka batroolka laga Turkey
Mashruuca TRACECA la Muhiimadda Turkiga Kordhinta
Mashruuca ropeway ayaa kordhin doona qiimaha brandka ee shirkadda Uzungol
Mashruuc ballaadhan wuxuu kordhin doonaa tartanka tartanka
Mashruuca tareenka xawaaraha sare wuxuu kordhin doonaa kartida dhaqaalaha iyo dalxiiska ee Erzurum
Warbixinta TCDD ee ku saabsan wareeridda Ankara
Bursa waxay kordhin doontaa dulsaaraha isbedelka magaalooyinka oo leh mashruucyo
Etihad Railway si loo kordhiyo dakhliga qaranka
Kabkaz Railway ayaa kordhin doonta Awoodda Saadka ee Samsun
Qalabaynta gaadiidka tareenka si kor loogu qaado dhoofinta
Marmaray 5 si loo kordhiyo tirada hoteelada sannad kasta 30
Caanaha lo'da ee la aruuriyey bishii Maarso ayaa kordhay 4,7 boqolkiiba
Maareynta Soocelinta Amarka Dunida Cusub
Garoonka Garoonka Gayrettepe-Istanbul ayaa kor u qaadi doona qiimaha 5
Corum si loo kordhiyo dhoofinta wadajirta wadada tareenka
Machadka SAMULAŞ wuxuu horumarin doonaa tayada Gaadiidka Dadweynaha
Gaadiidka Greater Istanbul ee Kordhinta Qiimaha Guryaha
Dhoofinta dheeraadka ah ee YHT ayaa kordhin doonta awoodda rakaabka ee 2 bin 454
Saddex dabaq ah Gawaarida Dheriga ah ee Istanbul oo kor u kaca qiimaha guryaha